Arsène Wenger oo ka hadlay suurtogalnimada uu tababare ugu noqon karo Manchester United – Gool FM
Arsène Wenger oo ka hadlay suurtogalnimada uu tababare ugu noqon karo Manchester United
(Manchester) 26 Sebt 2019. Tababaraha reer France ee Arsène Wenger ayaa ka hadlay suurtogalnimada uu macalin ugu noqon karo kooxda kubadda cagta ee Manchester United xilliyada soo aadan.
Man United ayaa ku bilaabatay xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League si liidata, iyagoo leh kaliya 8 dhibcood, lixdii kulan ee ugu horeysay ay ka ciyaartay ilaa iyo haatan, taasoo cadaadiska kusii kordhineysa macalinka reer Norwey ee Ole Gunnar Solskjær.
Haddab Arsène Wenger ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada beIN SPORTS wuxuu ku sheegay:
“Shaqada tababarka ee kooxda Manchester United waa riyada macalin kasta, waxaan kalsooni ku qabaa naftayda waxaanan leeyahay geesinimo igu filan”.
“Feker ahaanteyda, Manchester United waxay u baahan tahay afar ciyaaryahan oo kooxda koowaad ah”.
“Laakiin marka laga soo tago isugeyntaan, waxaan u arkaa in kooxda ay heysato liis awood u leh inay la tartamaan qof walba, kama foga kuwa kale sida ay dadka u maleynayaan”.
“Ma sheegi karo afarta magac ay kooxda u baahan tahay, laakiin haddii aan iraahdo waxay cinwaan u noqon karaan saxaafada ee meel walba ah, waan aqaanaa iyaga, Manchester United waxaa ka maqan inay kubadda ku raaxeysato iyo in ciyaartoydeedu ay ku garaacaan daafacyada kasoo horjeeda farsamo iyo xawaaro”.
“Manchester United waxay u baahan tahay xiddig garabka ka ciyaara ee dhameystiran iyo ciyaaryahan bur-buriye ah, muhiimada waa afar ciyaaryahan sida aan sheegay”.
Halyeeyga reer Brazil Ronaldo oo si cad u sheegay kooxda uu taageeri doono kulanka El Clásico-da ee Barcelona iyo Real Madrid
Muxuu ka yiri Zidane xiddigaha Vinícius Jr iyo Rodrygo, kaddib guushii ay xalay ka gaareen Osasuna??